Efe M Yi Ọ̀ Dị Mma? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Croatian Czech Dangme Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tiv Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Gịnị mere i ji kwesị ịkpachara anya gbasara ụdị efe ị na-eyi? Ọ bụ n’ihi na efe anyị na-eme ka a mata ụdị onye anyị bụ. Olee ihe uwe ị na-eyi na-agwa ndị mmadụ?
Ihe atọ na-adịghị mma ndị mmadụ na-eme na otú ị ga-esi zere ha
Nke #1: Iji ụdị ejiji a na-egosi na tiivi nakwa n’ebe ndị ọzọ a na-akpọsa ngwá ahịa.
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Theresa kwuru, sị: “Mgbe ụfọdụ, m na-achọ iyi efe ndị na-ewu ewu n’ihi na ahụla m ọtụtụ ihe banyere ya n’ebe a na-akpọsa ihe ndị gbara ọhụrụ. Ọ bụrụ na ihe juru mmadụ isi bụ foto ndị yi efe na-ewu ewu, ọ ga-eme ka onye ahụ chọsiwe ike iji ejiji ka ndị ahụ.”
Ọ bụghị naanị ụmụ agbọghọ ka ihe a na-akpọsa n’ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-adọrọ. Otu akwụkwọ Bekee a na-akpọ The Everything Guide to Raising Adolescent Boys kwuru, sị: “Ihe na-ewu ewu na-amasịkwa ụmụ okorobịa. Ndị na-akpọsa ngwá ahịa na-agba mbọ iwepụta ihe ga-amasị ha malite mgbe ha ka dị obere.”
Ihe ka mma i kwesịrị ime: Baịbụl kwuru, sị: “Onye ọ bụla nke na-amaghị ihe na-ekweta okwu niile, ma onye maara ihe na-echebara nzọụkwụ ya echiche.” (Ilu 14:15) N’ihi ihe a Baịbụl kwuru, mụta ịna-echebara ihe ndị pụtara ọhụrụ echiche. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị hụ efe e dere okwu Bekee bụ́ “sassy,” “hot,” ma ọ bụ “sexy,” jụọ onwe gị, sị:
‘Ọ bụrụ na m yiwe ụdị ákwà a, ònye ka ọ ga-abara uru?’
‘Olee ụdị onye ndị mmadụ ga-asị na m bụ?’
‘Ọ̀ bụ ụdị onye ahụ ka m bụ n’eziokwu?’
Ihe i nwere ike ime: Jiri otu izu leruo ákwà ndị na-ewu ewu anya, ma ndị nke a na-egosi na tiivi ma ndị nke a na-egosi n’ebe a na-ere ákwà. Olee ụdị ndị na-eyi ụdị uwe ahụ? È nwere ihe ndị na-ere efe ahụ na-eme ma ọ bụ na-ekwu nke ga-eme ka i chewe na i kwesịrị ịna-eyi ụdị efe ahụ? Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Karen kwuru, sị: “Otú ndị mmadụ si ekwu gbasara uwe ndị na-ewu ewu na-emezi ka ọ gụwa ọtụtụ ndị agụụ iyi efe ndị kacha mma iji gosi na ha sokwa biri, ndị ga-emekwa ka a hụ na ahụ́ ha mara mma. Ọ na-adịrị ndị na-akpọsa ngwá ahịa ghọtara ihe a mfe inweta ndị na-eto eto.”
Nke #2: Iji ejiji na-ewu ewu ka ha wee dị́ ka ibe ha.
Otu nwa okorobia aha ya bụ Manuel sịrị: “Ọ bụrụ na e nwere otu efe na-ewu ewu, onye ọ bụla ga-achọrịrị iyi ya. Ma i yighị ya, ndị mmadụ ga-ewere gị ka onye ime ọhịa.” Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Anna kwetara ihe a. Ọ sịrị, “Mkpa ndị mmadụ abụghị ma efe ahụ ọ̀ dịkwa mma, kama mkpa ha bụ ka ha dị́ ka ibe ha.”
Ihe ka mma i kwesịrị ime: Baịbụl kwuru, sị: ‘Kwụsịnụ ịbụ ndị na-eme omume dị ka usoro ihe nke a si dị.’ (Ndị Rom 12:2) N’ihi ihe a Baịbụl kwuru, leruo efe ndị i nwere anya ma jụọ onwe gị, sị:
‘Olee ihe m ji ekpebi ụdị efe na-amasị m?’
‘M̀ na-enwe mmasị inwe efe ụlọ ọrụ a ma ama mere?’
‘Mkpa m ọ̀ bụ ịna-eyi efe ga-eme ka ndị ọzọ mata na m sokwa biri?’
Ihe i nwere ike ime: Ị chọọ ịzụ efe, echela naanị gbasara nke na-ewu ewu ga-eme ka ị dị ka ndị ọzọ ma ọ bụ nke oge ya gaferela ga-eme ka ị gbapụ iche. Cheekwa otú efe ahụ ga-esi mee ka ahụ́ ruo gị ala. Ọ bụrụ na ahụ́ rụrụ gị ala, ị gaghị na-echegbu onwe gị ka ị dị́ ka ibe gị.
Nke #3: Iche na ọ bụ efe tapaara n’ahụ́ ma ọ bụ nke ga-eme ka a na-ahụ ahụ́ mmadụ anya ka mma.
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Jennifer sịrị: “N’eziokwu, mgbe ụfọdụ, mmadụ nwere ike ịchọ iyi efe ga-atapara ya n’ahụ́ ma ọ bụ nke ga-eme ka a na-ahụ ahụ́ ya anya ma ọ bụkwanụ nke dị́ mkpụmkpụ.”
Ihe ka mma i kwesịrị ime: Baịbụl kwuru, sị: “Unu ekwekwala ka mma unu na-achọ bụrụ ịkpa isi efu na iyi ihe ịchọ mma ọlaedo ma ọ bụ iyi uwe elu, kama ka ọ bụrụ mmadụ zoro ezo nke dị n’ime obi.” (1 Pita 3:3, 4) N’ihi ndụmọdụ a Baịbụl nyere, chee banyere ihe ga-akacha eme ka a na-ele gị anya ọma. Ọ̀ bụ mma elu ahụ́ ka ọ̀ bụ inwe àgwà ọma?
Ihe i nwere ike ime: A bịa n’ihe gbasara ejiji, ihe ị ga-eburu n’obi bụ ịna-eji ejiji dị́ mma. N’eziokwu, ọtụtụ ndị ekwetaghịzi otú ahụ, ma chegodị banyere ihe a:
È nwetụla mgbe gị na onye na-ekwu oké okwu ma na-ekwu naanị gbasara onwe ya kparịtara ụka? Ọ dị mwute na onye ahụ amaghị na ihe ahụ ọ na-eme ga-eme ka ị na-agbara ya ọsọ.
Ọ bụrụ na ị na-eyi efe ga-eme ka ọ dị́ ka ị̀ na-asị ndị mmadụ, ‘lewenụ m,’ ọ ga-eme ka ha gbawara gị ọsọ
Ọ bụrụ na ị na-eji ejiji otú na-adịghị mma, ị ga-adị ka onye ahụ. Ọ ga-adị ka a ga-asị na ejiji gị na-agwa ndị mmadụ, sị: ‘Lewenụ m.’ O nweziri ike ime ka ahụ́ ghara iru gị ala ma ọ bụ ka onwe gị na-ebu gị isi. O nwere ike ime ka ọ̀ na-agụsi gị agụụ ike ka ndị mmadụ na-ele gị, ma ndị ọma ma ndị ọjọọ.
Ị manụ na ndị na-akpọsa ngwá ahịa bụ ndị nwere ihe ha chọrọ ire ere. N’ihi ya, kama ịna-eyi efe ga-atapara gị n’ahụ́, na-eji ejiji dị́ mma. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Monica kwuru, sị: “Iji ejiji dị́ mma apụtaghị na ị ga na-ejizi ejiji ka nne nne gị. Kama, ọ pụtara na ị na-akwanyere ma onwe gị ma ndị ọzọ ùgwù.”
“M zụrụ otu sket buturu ibu. Ihe mere m ji zụọ ya abụghị maka na m buola ibu, kama ọ bụ maka na achọghị m ịna-eyi efe na-atapara m n’ahụ́. Ị̀ ma ihe ndị mmadụ nọ na-ajụ m? Ha na-ajụ m ma m̀ taala ahụ́. Iji ejiji dị́ mma na-eme ka mmadụ maa mma.”—Breanna.
“N’eziokwu, ahụ́ na-eru m ala ma m jie ejiji dị́ mma. Ọ bụghị naanị na efe m na-adị m mma n’ahụ́, kama ọ na-emekwa ka ahụ́ ruo m ala n’ihi na m ma na ebe ọ bụla m gara, m ga-agwali ndị mmadụ na m bụ Onye Kraịst. Agaghị m na-echegbu onwe m na ejiji m jiri abụghị ụdị ejiji Ndị Kraịst na-eji.”—Keren.
Ilerukwu Onwe Gị Anya